Linux Mint 14 Nadia ကိုတစ်ဆင့်ချင်း Install လုပ်နည်း Linux မှ
အကယ်၍ သင်သည် Linux တွင်အသစ်ဖြစ်ခဲ့လျှင် Linux Mint ကိုစမ်းသုံးရန်အကြံပေးခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသောဖြန့်ဖြူးမှုအပြင် Windows မှလာသည့်ရင်းနှီးမှုနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသောအသွင်အပြင်လည်းရှိသည်။
ဒီအရစ်ကျအသစ်အတွက်ကျနော်တို့ install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြပါ Linux က Mint 14 Nadia အဆင့်တစ်ဆင့် ... ဟုတ်ကဲ့ Dummy.
Linux Mint 14 ကိုမထည့်သွင်းမီ၊ အဆင့် ၃ ဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ရပါမည်။
download, Linux Mint ISO ပုံရိပ်။
BIOS ကို CD / DVD မှသို့မဟုတ် pendrive မှသင်ယခင်အဆင့်တွင်ရွေးချယ်ထားသောအရာပေါ် မူတည်၍ ပြင်ဆင်ပါ။
GRUB 2, Linux Mint အတွက် bootloader ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ငါ option ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် Linux Mint ကိုဖွင့်ပါ.
Linux Mint boot တက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ Linux Mint Install:
သင်ကနိမ့်ဆုံးတပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြည့်မီကြောင်းအတည်ပြုပါ ဆက်လုပ်ပါ။ သတိပြုသင့်သည်မှာတစ်ခုတည်းသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်မှာလိုအပ်သော disk space ရှိရန်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုရှိရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ သင်ကပိုမိုအဆင်ပြေလာသောအခါအဘို့အ packages များဒေါင်းလုပ်ကျော်သွားနိုင်ပါလိမ့်မည်ကတည်းက။
က) operating system အဟောင်းကိုဖယ်ရှားပြီး install လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် - အရာအားလုံးကိုပယ်ဖျက်ပြီးအထက်တွင်ထည့်သွင်းပါ။ သင်၏ခေါင်းကိုအပူပေးရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်၎င်းနှင့်တူသည်။
ခ) disk ကိုလက်ဖြင့်ခွဲခြမ်း။
ဒုတိယ option ကိုသင်ရွေးပါက၊ disk partitioning wizard စတင်ပါလိမ့်မည်။
ဤအဆင့်သည်မလုပ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်မည်သည့်အရာကိုဆိုလိုသည်ကိုသိသောအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိအဆင့်မြင့်သုံးစွဲသူများအတွက်သာအကြံပြုပါသည်။ မှားယွင်းသောအဆင့်တိုင်းသည် disk ပေါ်ရှိဒေတာဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ကဒီအချက်ကိုမစွန့်စားချင်ရင်၊ မလုပ်ပါနဲ့။
အရာရာတိုင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် OK ကိုနှိပ်ပါ။ သင်အပြောင်းအလဲများကိုသင်သဘောတူရဲ့လားမေးလိမ့်မယ်။
အရာရာတိုင်းအဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်ကိုနှိပ်ပါ ယခုသွင်းပါ။ ပထမအချက်မှာအချိန်ဇုန်ကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။
နောက် configure လုပ်ပါ့မယ်။ သင်ရွေးချယ်ထားသောကီးဘုတ် (အထူးသဖြင့်ñ, çနှင့် Altgr + အချို့သောသော့ချက်ပေါင်းစပ်မှုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးသောသော့များ) ကိုစစ်ဆေးရန်မမေ့ပါနှင့်။ အကယ်၍ ၎င်းအဆင်မပြေပါကအခြားကီးဘုတ်အပြင်အဆင်များကိုစမ်းကြည့်ပါ။
Keyboard ကို configure လုပ်ပြီးတဲ့နောက် user config ကိုရောက်လာတယ်။
သငျသညျ username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်ပါတယ်, ကွန်ပျူတာများအတွက်အမည်နှင့် log in ဝင်ရန်စကားဝှက်တောင်းရန်လိုအပ်သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်။ သင်ဤစက်ပေါ်တွင်သိုလှောင်ထားသည့်စာရွက်စာတမ်းများ၏လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်မှုမရှိလျှင်ဤနေရာမှ (ကျွန်ုပ်သည်စနစ်အားနှေးကွေးစေနိုင်သောကြောင့်) ကျွန်ုပ်အကြံပြုမထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖိုင်တွဲများကိုလည်းစာဝှက်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်ဖိုင်မိတ္တူစတင်ပါလိမ့်မည်။ Linux Mint ၏ကောင်းမှုအချို့ကိုပြသမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Linux Mint 14 Nadia ကိုတစ်ဆင့်ချင်း install လုပ်နည်း
ငါ LMDE 201303 ကိုတိုးချဲ့ထားသောအခန်းကန့်၌တပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် win7နှင့် Ubuntu 13.04 ကို install လုပ်ပြီးပြီ။ Ubuntu ကိုလုံးဝ ဖျက်၍ သော့ခတ်သည်။ Ubuntu မရှိကြောင်းစစ်ဆေးသည့်အခါ w7 ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
R14 © ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဤဖြန့်ဝေမှုနှင့်အတူ linux သို့ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာရှိနေပါသည်။ ငါ windows7နဲ့ 8 ဘေးမှာ manual partitions နဲ့အတူ install လုပ်ထားတယ်။ ဒါ့အပြင် linux mit ပေါ်လာတဲ့တစ်ခုတည်းသော linux mit ပေါ်လာတဲ့ windows နှစ်ခုထဲကတစ်ခုမပါ ၀ င်တဲ့ tuto တွေနဲ့ grub ကိုပြန်လည်ဆယ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏စနစ်ဟောင်းများကိုပုံစံချစရာမလိုဘဲမည်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်မည်နည်း။ နှုတ်ဆက်ခြင်း!
R14 ©မှ Reply
ရီကာဒို Ariza Velez ဟုသူကပြောသည်
grub2 ကို console ထဲမှာမွမ်းမံပါ၊ ပြီးရင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ
Ricardo Ariza Velez အားပြန်ပြောပါ
အိန်ဂျယ် Molina ဟုသူကပြောသည်
ငါ mint ကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်အဆုံးသတ်ခါနီးမှာ installation window ကိုငါ့ကိုမပို့ဘဲနဲ့ပိတ်လိုက်တယ်။ ကွန်ပျူတာကို Mint မဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ Mint မဖွင့်လိုက်ရင်၊ သင်ပုန်းနေသည့်သင်တန်းများနှင့်မျက်နှာပြင်သည်အမည်းရောင်ဖြစ်နေသည်။ ?
Angel Molina အားပြန်ပြောပါ
Rodrigo Frias ဟုသူကပြောသည်
ငါ Mint ကို LVM ပေါ်မှာ install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့သူကငါ့ကိုရိုက်တယ်၊ အရာအားလုံးကို install လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် grub ကို install လုပ်တဲ့အခါအမှားတွေဖြစ်သွားတယ်။ ဤကဲ့သို့ပူစီနံကိုတပ်ဆင်ရန်လက်စွဲကိုသင်သိပါသလော။
Rodrigo Frias အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Linux အတွက်အသစ်တစ်ခုပါ။ linux mint 14 nadia ဗားရှင်းကို install လုပ်ပြီးပြallနာကျွန်ုပ်သည်စပိန်ဘာသာဖြင့်အပြည့်အ ၀ မရရှိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ရမည်ကိုမသိပါ၊ သို့မဟုတ်ဤပြorနာကိုဖြေရှင်းရန်ဘာလုပ်ရမလဲပြတင်းပေါက်များတွင်အသုံးပြုသော ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြောရမည်ကိုပြောပြပါ၊ ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အကူအညီတောင်းရန်မျှော်လင့်ပါသည် !!!!!! :)
ကျွန်ုပ်မှန်ကန်စွာမှတ်မိပါကသင်သည်ဘာသာစကား-Pack-es (နှင့်အခြားအရာများ) packets များအပြင် language-support-es သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာများကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ အထုပ်မန်နေဂျာနှင့်အတူသူတို့ကိုရှာပါ။
ရီကာဒို Fabara Camino ဟုသူကပြောသည်
အီကွေဒေါနိုင်ငံမှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Redmond OS ကို ၁၀ နှစ်ကျော်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ပရိုဂရမ်များအကြောင်းအမှန်တရားကိုကျွန်ုပ်သိရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်အတွက်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဒီဇိုင်နာနှင့်မာလ်တီမီဒီယာဝဘ်ဆက်သွယ်ရေးသမားဖြစ်၏ အဲဒါကို GNU / LinuxMint 10 Cinnammon မှာ Core i15 laptop အတွက်ရှာသည်။7bits, 64GB RAM, 8GB C (programs), 165GB D (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ) ။ ဒီ distro ကို dual boot တစ်ခုအနေနဲ့တပ်ဆင်ချင်တယ်။ မင်းရဲ့ website ကိုငါစစ်ဆေးပြီး disk ကိုဘယ်လိုခွဲထုတ်ရမှန်းမသိဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤသင်ခန်းစာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ https://www.youtube.com/watch?v=-kP77ULr6pk? D နှင့် C. တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Ricardo Fabara Camino ကိုပြန်သွားပါ
နှစ်ပေါင်းများစွာငါ debian / ubuntu ၏အနကျအဓိပ်ပါယျကိုအသုံးမပွုခဲ့ဘူးဒါပေမယ့် sudo aptitude update grub2 ကို console မှာသာရိုက်ထည့်ပြီးပြီဆိုတာငါသိသလောက်ဆိုလျှင်၊ အကယ်၍များ ဒီပြောင်းလဲမှုကတစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုပြုပြင်တည့်မတ်သော်လည်း၊
Darwin PACHECO ဟုသူကပြောသည်
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများမပျောက်ဆုံးစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာပုံမှန်အားဖြင့် windows ကိုစတင်ခြင်း၊ start ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ disk စီမံခန့်ခွဲခြင်းကိုနှိပ်ပါ။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စတစ်ခုတွင် disk D ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်ညာဖက်ကလစ်နှိပ်ပြီး volume ကိုလျှော့ချပါ။ ဒီနေရာမှာ linux OS အသစ်ကိုတပ်ဆင်တော့မယ်ဆိုလျှင်အနည်းဆုံး 20 gb အကြံပြုသည် ထို့နောက်၎င်း Partition အသစ်သို့မဟုတ် Hard disk နေရာလွတ်သို့သင် Linux Mint ထည့်သွင်းမည့်အခန်းကန့်များကိုရွေးချယ်သောအခါသင်သည်မည်သည့်အခန်းကန့်ကိုမျှသတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ။
DARWIN PACHECO သို့အကြောင်းပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ Windows7PC တွင် Linux ကိုတပ်ဆင်လိုပါသလား။
၎င်းကို linux ၏ထိပ်တွင်သင်တပ်ဆင်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးအချက်မှာအခန်းကန့်တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ သင် windows7၏သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိလိမ့်မည်။
ငါ Linux လောကကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ချင်တယ်။ install လုပ်ဖို့လိုတယ်၊ ငါ hard drive ထဲမှာ 250 GB partition နဲ့လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ hard drive ၏အခြားအခန်းကန့်တွင်ပြတင်းပေါက်များကိုချန်ထားခဲ့သည်။ ပြaနာရှိလား မည်သည့် operating system ကိုကျွန်ုပ်ဖွင့်လိုသည်ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ ၀ င်းဒိုးများကိုတပ်ဆင်ထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် linux နှစ်ခုစလုံးကိုအသုံးပြုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်ပြသနာမှာ installation ကိုပြုလုပ်သည်နှင့်အပြီးတွင်၎င်းသည်ပြီးဆုံးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ရင်ခွင် c ကိုပြန်ဖွင့်သည့်အခါ၎င်းသည်မြဲနေပြီးအောက်ပါစာကိုပြသည်။ manager : အချက်ပြ ၁၅ ကိုဖမ်းမိသည်၊ ပိတ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည် pc ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်လည်စတင်သောအခါကျွန်ုပ်သည် windows များနှင့်တိုက်ရိုက်စတင်သည်။ linux ကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်သို့မဟုတ်ပြtheနာကဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်သည်သင်ယူသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သော Linux အကြောင်းကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့ရာများမှာတော့ operating system သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုငါထင်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်ကောင်းစွာရှင်းပြသောကြောင့်ဤဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်ပါသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် Linux မှသတင်းများကိုဆက်လက်ရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်တော့်မှာ hard drive ၂ ခုရှိတယ်၊ တစ်ခုကအလယ်တန်းတစ်ခု၊ အလယ်တန်းတစ်ခု၊ ကျွန်တော့်မှာ Windows2ရှိပြီးနောက်တစ်ခုကို format ချတယ်။ ငါ linux mint ကို boot လုပ်နိုင်ဖို့ system တော်တော်များများကိုကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှငါ့အတွက်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ကြဘူး။ တူညီတဲ့ hard disk ကနေဒီတစ်ခုထဲကိုကူးယူပြီး bios ထဲကို ၀ င်တဲ့အခါ၊ ဒုတိယတစ်ခုကနေ boot တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ install လုပ်လိုက်တာမရှိဘူး။ ငါ usb ကနေတပ်ဆင်ချင်သောအခါငါ operating system ကိုလည်းငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်
Linux ဟာ crap ပါ။ ကျွန်တော့် pc မှာ install လုပ်လို့မရဘူး။ windows နဲ့ငါ့ကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ကပိုကောင်းတဲ့ option ဖြစ်ချင်သလား။
ကောင်းပြီ၊ ငါလည်းဒီမှာရောက်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော့်ကို MAC ကို restart လုပ်ခိုင်းလိုက်ရင်အရာအားလုံးကိုပြန်လှည့်လိုက်ရင်ကောင်းသွားပြီ။
Jaime Cabrera မာယာ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော်တို့ကို Linux နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ PC မှာ Linux Mint ကို install လုပ်ဖို့ဒီတစ်ခုကိုသုံးပါမယ်။
Jaime Cabrera Maya သို့ပြန်သွားပါ
အသစ်တစ်ခုကိုစင်ကြယ်သော disk ကို၏ဖြစ်ရပ်အတွက်။ Linux ကိုအရင် install လုပ်တာပိုကောင်းလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
မဟုတ်ဘူး Windows ကိုအရင် install လုပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်အဆုံးသတ် Windows ကိုတပ်ဆင်ပါက GRUB ကိုဖျက်ဆီးပြီး၎င်းကိုထပ်မံတပ်ဆင်ရပါလိမ့်မည်။
ငါလွတ်လွတ်လပ်လပ်အာကာသအတွင်း Mac OS ဘေးတွင်က install လုပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအဆင့် ၄ (Linux Mint ကိုထည့်သွင်းဖို့ပြင်ဆင်နေ) မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူကလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတယ်၊ ငါဆက်လုပ်မယ်၊ ဒါကမှမရှိဘူး။
Javier Garcia က ဟုသူကပြောသည်
ငါ linux mint 17 ကို install လုပ်ပြီးအရာအားလုံးကိုပြwithoutနာမရှိဘဲထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုအခန်းကန့်တွေအကြောင်းဘာတစ်ခုမှမတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူး။ သူကကျွန်တော့် windows ရှိရာ C partition မှာ install လုပ်တယ်လို့စိတ်ကူးမထားခဲ့ပါဘူး။ ပြproblemနာက partition D ကငါ့ကိုအသိအမှတ်မပြုတဲ့အချက်ပဲ။
javier garcia သို့ပြန်သွားပါ
ငါ၏ linux mint တွင် swap partition ကိုငါမဖန်တီးနိုင်ပါ။ ငါဘယ်လိုလုပ်သလဲ အဘယ်အချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်ထည့်ရမည်နည်း။
မင်္ဂလာပါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်! မင်းပို့စ်တင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အမှန်တကယ်မှာ linux mint ကို install လုပ်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိခဲ့တယ်၊ ငါက partitions တွေကိုအမြဲချိတ်ထားတယ်။ ငါ့မှာ Hard Drive ၂ ခုရှိတယ်။ အခန်း ၃ ခန်းစီရှိတယ်။ အခုပြtheနာကိုတွေ့ပြီ။ ဒုတိယ hard drive ကနေအခန်း ၂ ခုကိုငါဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ Linux Linux ကို install လုပ်ဖို့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပြန်လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ငါတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီပထမ ဦး ဆုံး hard drive ကို board မှ disconnect လုပ်ရန်သွားမည်ဖြစ်သကဲ့သို့အုပ်စုများမှမှတ်ချက်များတွင်၎င်းတို့ပျောက်ဆုံးနေသော data များကိုတွေ့ရသဖြင့် partition editor နှင့်များစွာကစားသောကြောင့်ဖြစ်ရမည်။
Partition လုပ်ပြီးနောက် "install now" ကိုနှိပ်သောအခါအောက်ပါအမှားကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရသည်။ ဤအခန်းကန့်ကို "EFi boot partition" အဖြစ်အသုံးပြုရန်မှတ်သားသင့်ပြီးအနည်းဆုံး ၃၅ MB ရှိသင့်သည်။ သတိပြုရမည်မှာ၎င်းသည် boot / boot ပေါ်တွင်တပ်ထားသောအခန်းကန့်နှင့်မတူပါ။ »
အကယ်၍ သင်သည် partitioning menu သို့ပြန်မသွားဘဲဤအမှားကိုမပြင်ဆင်ပါက၊ boot loader ကိုနောက်ပိုင်းတွင်ပျက်ကွက်နိုင်သည်။
Muahahahahaha !!!! (အောင်ပွဲခံရယ်မောသံများ)
သူသည် damn windows 8.1 ၏ firmware နှင့် ပတ်သက်၍ ပြသနာများစွာရှိခဲ့ပြီး windows XP သို့မဟုတ်7ကို install လုပ်ရန်အကြောင်းမရှိပါ။
ငါ Linux Mint disk ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသတိရလိုက်တယ်။ Linux ဟာမိုက်မဲတဲ့ firmware ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာ ၅ မိနစ်လောက်မပြည့်သေးဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ Windows XP SP5ကို partition တစ်ခုအနေနဲ့ install လုပ်လို့ရပြီ။
Marty Burgos အားပြန်ကြားပါ
ubuntu 16 နှင့် / or mint ကိုကျွန်ုပ်၏ PC တွင် W7 နှင့် install လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ပြissueနာမှာကျွန်ုပ်၌ SATA နှင့် IDE နှစ်ခုရှိ disk များရှိသောကြောင့် W7 ကို SATA တွင်ထားခဲ့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤအရာသည်ငါ facultd နှင့်အခြားပရိုဂရမ်များအတွက်အများဆုံးအသုံးပြုပြီး IDE ကို Linux နှင့်ကစားရန်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြနာက multi boot ကို install လုပ်ချင်ရင် Linux linux ကိုသာ ၀ င်ရောက်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် Windows ကိုငါလုံးဝဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ နေရာတိုင်းမှာကြည့်နေတယ်။
PoEdit သင်ခန်းစာ - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲပရောဂျက်များကိုမည်သို့ဘာသာပြန်ရမည်နည်း